हिमाल खबरपत्रिका | "सूचना लुकाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता छ"
"सूचना लुकाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता छ"
२१ पुसमा 'सूचना अधिकारीको निर्देशिका' जारी गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्, "जनतालाई सूचना प्राप्त गर्न निर्देशिकाले सहज बनाउनेछ ।"
सूचना अधिकारी लक्षित यस्तो निर्देशिकाको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
सहज रुपमा जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउन, सरकारी कामकारबाहीलाई र्सवसाधारणको जानकारीमा ल्याउन र सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन निर्देशिका जारी गर्नुपरेको हो ।
निर्देशिकाले जनताको सूचनाको हक सहज बनाउँछ भन्ने आधार चाहिं के छ ?
संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसअनुसार जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । र्सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्ने, २० वर्षम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने, कानून बमोजिमका सूचना र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरालाई निर्देशिकामा राखिएको छ ।
र्सवसाधारणले सहज रुपमा सूचना पाउन नसक्नुको कारण के हो ?
पहिलो त आमनागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी नै छैन । दोस्रो समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । कर्मचारीमा सूचना र्सार्वजनिक गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता छ । सूचना जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा कर्मचारीले आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । अर्कातिर हामी सचेत वर्गले पनि जनतालाई सूचनाको हकबारे सुसूचित गराउन सकेनौं ।
नागरिकलाई सूचनाको हकबारे सचेत गराउने मुख्य दायित्व त सरकारकै होइन र ?
जनतालाई अधिकारबारे जानकारी गराउने काम राज्यकै हो । यहाँ सरकार कानून बनाउँछ तर, कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिंदैन । यस्तो अवस्थामा बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सचेत गराउन आवश्यक छ ।
सहज रुपमा सूचना पाउने वातावरण कहिले बन्न सक्ला त ?
बलियो लोकतन्त्र, राजनीतिमा स्थिरता र आर्थिक समृद्धिसँगै यो काम पनि सहज हुन्छ । कर्मचारीमा पनि हामी शासक होइनौं, सेवक हौं भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ ।